Nbudata Tupolev Tu-124 FSX SP2 & P3D - Rikoooo
Na omenala nke ugbo elu Russia, nke a bụ Tupolev TU-124, ihe nlereanya mara mma nke nwere ụda ọdịnala. Enweghị VC (kobere kobere) ma ọ bụghị ihe kachasị mkpa, n'eziokwu, nke a add-on bụ nke dị ugbu a maka kọmiti ya nke 2D bụ nke zuru oke, ị ga-amụta akwụkwọ ntuziaka maka ịmara ụgbọ elu a, ọ bụkwa ọgwụgwọ! Ejiri ederede atọ: Aeroflot 60s, Aeroflot 70s na CSA (Ceskoslovenske Avialinie)
The Tupolev Tu-124 (NATO code: Cookpot) bụ a Soviet airliner mkpụmkpụ-osisi ike ibu 56 njem. Ulo oru na 1962, ọ e wuru na 165 mbipụta.
Wuru site na ụlọ ọrụ Tupolev, e mere ya izute choro Aeroflot maka a mpaghara airliner iji dochie Ilyushin Il-14. Mepụtara site na-ajụ-osisi Tupolev Tu-104, ya anya ka a nta version nke ya, siri ike ịmata ihe dị iche n'ebe dị anya, dị ka ikpeazụ ngwa agha na-ike n'ime nku. Ma ọ bụ na e nyochawa a nwee akwụkwọ. The Tu-124 nwere ọtụtụ ndozi dị ka a parachute nāpunara n'ihi na mberede landings ma ọ bụ n'ebe na-alọ-ebupụta, ala-mgbali na taya maka ọdịda na ike ike na-ebupụta. Ọ na--eme ka ịrụ ọrụ nke ọma, ịbụ ndị mbụ na-adịghị osisi turbofan engines onwem.
-Nkọwa nke 2D panel na foto
Onye edemede: SCS & Samdim Design Group